एउटै घटनामा दुई सन्तान गुमाएकी आमाको रोदन देख्दा कसको मन नरोला? (भिडियो सहित) – Sidha Onlinepatra
ट्रकको ठक्करबाट बाबु छोराको मृ\_त्यु. Plz फोटो छोएर Rip लेखीदिनु होला?
मुख्य पृष्ठ /Video/एउटै घटनामा दुई सन्तान गुमाएकी आमाको रोदन देख्दा कसको मन नरोला? (भिडियो सहित)
बिजय साहीलाई पुन्यले यस्तो भने…
पोखराको सडकमा ८ बर्षीया बालिकाको भोक उपचार केन्द्र, हुनेले दिने नहुनेले लिने
पोखरामा भेटियो ७५ किलोको बाख्रा (हेर्नुहोस् भिडियो)